Inkambo yamahhala ye-gvSIG - iGeofumadas
Inkambo yamahhala ye-gvSIG
NgoFebhuwari, 2011 Ukufundisa CAD / GIS, I-GvSIG
Ngokunethezeka okukhulu sithuthukisa ithuba elinikezwe yi-CONTEFO yokusebenzisa izifundo ze-10 mahhala gvSIG.
CONTEFO ngokubambisana ne-Association gvSIG inikeza ukukhuthazwa kwe izifundo eziyishumi zamahhala Izinga lomsebenzisi. Inkambo ehambelana nohambo lwezitifiketi "Izinga lomsebenzisi"Ngesikhathi samahora angu-60 phakathi namaviki angu-6 ekufomeni kwe-teletraining.
I-lottery yangasese izobanjelwa phakathi kwazo zonke izicelo ezamukelwe. Ukuze isicelo sakho sivunyelwe, kufanele ugcwalise ifomu lokubamba iqhaza elivela ku-www.contefo.com/novedades noma ku-www.contefo.com/moodle.
Ukwamukela izicelo kuzophela i-13 March ka-2011.
Inkambo izoqala ngoMashi 18 we-2011.
Amarekhodi enkundla atholakalayo
Inhloso yalokhu kukhushulwa ukuthi abafundi bahlole ikhwalithi yezifundo ezinikezwa yi-CONTEFO, ngoba ikhwalithi yabo iyinsika eyisisekelo lapho isenzo sokuqeqeshwa senkampani sakhiwe khona. Kuze kube manje, ekuqaleni kwesifundo, kuzophoqeleka ukuthi umfundi aklonyelisiwe enze ucwaningo ngokulindelwe yilezi zifundo kanye nohlolo lwesibili lwekhwalithi ekugcineni kwezifundo.
Kusukela kulo mzuzu kuqhubeke, ukubhaliswa oku-inthanethi ku-gvSIG - Uhlelo lokuqeqeshwa kwedeskithophu luzovuleka unomphela.
Sifisela wena inhlanhla emgqeni.
Team Contempo Ukubonisana Nezobuchwepheshe Nokuqeqesha.
Thumela Previous«Langaphambilini Vula amathuluzi we-CAD, amathuluzi wokuhlela we-gvSIG
Post Next Ilinde i-Ipad 2Okulandelayo »